FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA LEONBERGER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Leonberger
Sary natolotry ny LionHill Kennels
Vakio amin'ny bur-ger
Alika miasa lehibe be io hozatra io. Ny loha dia manana endrika mahitsizoro sy lalina kokoa noho ny sakany. Ny lohan'ny lahy amin'ny ankapobeny dia lehibe kokoa noho ny lohan'ny vavy. Somary domed ilay karandoha. Manana sarontava mainty izy ary vava somary lava. Ny sarontava mainty dia tsy tokony hihoatra ny volomaso ilay sarontava dia mety hatreny amin'ny maso na ambonin'ny maso, fa tsy mihoatra ny loha manontolo. Mainty foana ny orona lehibe misy vavorona misoritra mazava. Tokony ho mainty ny molotra, ary matetika dia tery sy maina. Amin'ny lehilahy manana lohany tena be voninahitra, manidina somary malalaka ary indraindray dia somary mihantona kely ny mason'izy ireo. Manidina manidina ny loosy ny loose, ka mety ho rendrika kely ny lehilahy sasany. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny hety na manaikitra. Ny sofina salantsalany dia telozoro endrika, misy nofo, mihantona fisaka ary manakaiky ny loha. Ny tendron'ny sofina dia avo lenta miaraka am-bavan'ny vava. Hozatra ny hatoka ary matanjaka ary tsy misy dewlap. Ny palitao antonony hatramin'ny lava, mahazaka rano, misy dobo mavo, mavo volamena hatramin'ny mena, mena-volontany, fasika, crème, mavo mavo ary izay rehetra mitambatra amin'ireo loko ireo, miaraka amin'ny sarontava mainty foana. Ny loko rehetra dia mety misy tendrony mainty fohy kokoa na antonony na lava amin'ny akanjo ivelany. Mety misy kofehy kely na fofona fotsy eo amin'ny tratra ary misy volo fotsy eo amin'ny rantsantongony. Misy hatrany ny adihevitra momba ny habetsaky ny fotsy avela. Ny fari-pahaizana FCI dia milaza hoe 'toy ny felatanana', fa miankina amin'ny tanan'iza no resahinao. Ny fehilehin'ny Leonberger dia mamorona endrika toy ny liona. Ny mana ny lahy dia mety maharitra 4 taona vao mampitombo ny mana ny vehivavy dia tsy dia miharihary noho ny an'ny lehilahy. Ny dewclaw aoriana dia esorina. Volom-borona ny tongotra anoloana sy aoriana. Mihantona mahitsy ilay rambony miraviravy. Mainty ny lamban'ny tongotra. Matetika manana tongotra amin'ny Internet izy ireo.
Ny Leonberger dia manana toetra mahavelona. Sahy izy, manan-tsaina, maharitra ary be fitiavana. Manana endrika mamy izy io. Be fitiavana sy tsy miovaova, milamina ary milamina, ny Leonberger dia tia ny olon-drehetra fotsiny. Ny faharanitan-tsainy dia miavaka ny tsy fivadihana ary ny fitiavana ny ankohonany dia tsy manam-paharoa. Manana toetra tia namana izy. Leonberger mahay mandanjalanja dia ho mendri-pitokisana be ary hanana faharetana tsy mampino, na dia amin'ireo ankizy maharikoriko indrindra aza. Miaraka amin'ny ankamaroan'ireny alika ireny, raha miha mahery vaika ny toe-draharaha, fa tsy mampiseho herisetra, dia mandeha fotsiny i Leonberger. Ny ankamaroan'ireny alika ireny dia mety handray fihetsika ratsy amin'ny diany. Ny Leonberger dia tsy mamaly tsara ny fampiofanana amin'ny fomba fiasa henjana dia mitaky faharetana. Ny tompon-trano dia tokony ho mafy orina, fa milamina , matoky tena sy tsy miovaova . Anarana serasera olombelona amin'ny canine tena ilaina. Mila fiofanana manokana ny fahitana mpiambina tena mahay. Matetika antsoina hoe goavambe malefaka ny Leonberger, matotra sy dodona ary vonona ny hampifaly, mamaly tsara ny fiofanana. Ny Leonberger dia afaka mifandray amin'ny alika hafa. Fiaraha-miasa sy fanazaran-tena aloha , satria ho lasa olon-dehibe lehibe io alika io. Ampianaro ny alikanao hanaja ny olombelona amin'ny alàlan'ny fampiofanana azy tsy hitsambikina, ny voditongotra hitarika ary hiditra sy hivoahana ny varavarana sy vavahady rehetra aorian'ny olombelona. Ny Leonberger dia mavitrika kokoa ary mandrindra mihoatra ny maro hafa karazana goavambe .
Hahavony: lahy 29 - 31 santimetatra (74 - 80 cm) vehivavy 27 - 29 santimetatra (61 - 74 cm)
Milanja: Lehilahy 130 - 170 pounds (59 - 77 kg) Vehivavy 100 - 130 pounds (45 - 59 kg)
Tahaka ny karazana goavambe goavambe, dia mora voan'ny tsimokaretina hipla sy aretina / aretina hafa amin'ny taolana izy ireo. Ireo lesoka amin'ny hodi-maso sy aretin-taolana. Olana mety hitranga amin'ny fitondran-tena.
Ny Leonberger dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Tsy mihetsika izy io ao an-trano ary hahavita tsara indrindra amin'ny tokotany lehibe farafaharatsiny. Tian'izy ireo ny toetrandro mangatsiaka ary afaka mipetraka ao anatiny na any ivelany, fa ny ankamaroany dia aleony na aiza na aiza misy anao.
Ity karazana ity dia tsy mila fanatanjahan-tena be loatra, na izany aza, mila entina a mandeha isan'andro . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Tian'izy ireo ny tafiditra ao anatin'ny fitsangantsanganana rehetra ao amin'ny fianakaviana ary tena mahay mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny tontolo iainana. Tian'izy ireo ny milomano, mandeha an-tongotra ary ampiofanina hisarika sarety sy sled. Raha mikasa ny hisintona sarety Leo ianao na handeha hitsangantsangana dia mila miandry mandra-pahatonga ny alika hitombo. Tsy soso-kevitra alohan`ny tokony ho 18 volana ny alika.
9 ka hatramin'ny 15 taona eo ho eo, miaraka amin'ny salan-taona 11 taona.
Ankizy 6 ka hatramin'ny 14 eo ho eo. Ny haben'ny fako Leo dia miovaova be. Izy ireo dia fantatra amin'ny fananana alika lehibe miaraka amin'ny rakitsoratra hoe a fako misy alika kely 18 !
Ilaina ny fanosorana isan-kerinandro. Tokony hadio hatrany ny sofina ary diovina ny nify rehefa ilaina izany. Mandroa raha tsy ilaina. Ny de-matting sasany dia ilaina mba hisorohana ny toerana mafana. Ny toetrandro lena sy mando / mando no tompon'andraikitra amin'ireo toerana mafana. Zahao ao ambadiky ny sofina, volom-borona amin'ny tongotra sy rambony raha misy tsihy. Ny Leonberger dia mpantsaka mavesatra amina vanim-potoana mandritra io fotoana io ny alika dia tokony hosasana sy kosehina isan'andro.
Ity karazana ity dia naorina tamin'ny 1846 tao Leonberg, Alemana, ao amin'ny faritr'i Wurttemberg avy amin'ny mpiompy alemana Heinrich Essing avy niampita ny Terre-Neuve , St. Bernard , ary ny Pyrenees mahafinaritra . Ny tanjon'i Heinrich Essing dia ny hamorona karazana mety hitovy endrika amin'ny liona. Leonbergers dia fananan'ny fianakavian'ny mpanjaka maro toa an-dry Napoleon II any France, Empress Elizabeth avy any Austria, ny Prince of Wales, ny Emperora Napoleon II, Bismarck ary ny mpanjaka Italiana Umberto. Tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia maro ny Leonbergers nohafarana tany Russia. Toy ny karazany maro, ny ady lehibe dia saika nitondra azy lany tamingana . Tamin'ny faran'ny Ady Lehibe Faharoa dia alika vitsivitsy sisa no tavela. Tamin'ny taona 1945, Alemanina maromaro no nanangona ny sasany tamin'ireo sisa tavela tao Leonbergers ary nanangana indray ny karazany. Ankehitriny dia nahazo ny lazany tany Eropa indray i Leonberger. Ny fenitra ofisialy dia napetraka tamin'ny 1949. Ny Leonberger voalohany dia nafarana tany Etazonia tamin'ny 1971. Ity karazany marobe ity dia nahomby tamin'ny fiarovana ny biby fiompy, fikarohana sy famonjena, fankatoavana, famonjena rano, fanarahan-dia ary mpiara-miasa amin'ny fianakaviana.
Alika kely Leonberger, sary nahazoana lalana avy amin'i Lionhill Kennels
Leonberger alika kely mitsako kiraro — Sary natolotry ny LionHill Kennels
'Ity no zanako kely, Beaudacious, amin'ny 5 volana. Leonberger madio izy. Tiany ny milalao ady tosika, mitsako ny kong sy mandraraka ny fitoeran-dranony ary mandry fotsiny ao. TIA milalao anaty rano izy. Hitanay matory izy miaraka amin'ny lohany ao anaty vilia rano koa! Tiany ny mandeha an-tongotra. Faly foana izy mahita ahy na dia avy tany amin'ny efitrano hafa aza aho! Beau dia alika kely ankafizin'ny olona ary tsy mahay mifidy. Tsy matahotra na inona na inona izy, ny banga, fanamainana volo, tsy misy! Tena marani-tsaina koa izy ary mianatra haingana. Tena sambatra izahay manana zanak'alika mamy sy malefaka toy izany. '
Tsara tarehy ny alikan'i Leonberger amin'ny 5 volana eo amin'ny seza ilalaovana.
Barney the Leonberger amin'ny 1 1/2 taona
Jereo ohatra misimisy kokoa momba an'i Leonberger
Sary Leonberger 1
Sary Leonberger 2
Sary Leonberger 3
inona ny alika kely chorkie